Talojeedin ku socota Midowga Musharixiinta Madaxweynaha iyo Mucaaradka (Qormo sharciyeed) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Talojeedin ku socota Midowga Musharixiinta Madaxweynaha iyo Mucaaradka (Qormo sharciyeed)
Waxaa caddaatay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo aqoonsaneyn dastuurka kmg, tusaale ahaan qodobbada 1, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55-86, 87, 90; Ayadoo Golaha Shacbiga kalsoonida kala noqday Xukuumadda RW Xassan Cali Kheyre, Madaxweyne Farmajo wuxuu ku dhaqaaqay arrimo badan oo sharcidarro ah sida magacaabidda Kusime RW ee xukuumadda Xil-Gaarsiinta, guddiga garsoorka, guddiga musuqmaasuqa, wakaaladda betroolka, magacaabidda guddiga wakaaladda Betroolka, bixinta qandaraaska ceelasha shidaalka.
Madaxweyne Farmajo wuxuu iska dhegatiray wax ka wax qabashada dhalliilaha iyo dalabka Midowga Musharrixiinta XM iyo Madaxweynayaasha DG qaarkood iyo Bulshada Ra’yidka iyo soo jeedinta beesha caalamka ee aheyd in wada hadal lagu dhammeeyo qodobbada aan waafaqsaneyn sharciga iyo heshiiska siyaasadeed iyo habraaca hirgelinta doorashada 2020/2021.
Waxaa caddaatay in Madaxweyne Farmajo ka go’aan tahay inuu rabo inuu hirgeliyo doorasho sharcidarro ah ee ka dhacda Galmudug, Koofur Galbed, Hirshabelle, iyo Muqdisho. DG Jubbaland iyo Puntland waxay geli doonan qas siyaasadeed xitaa haddii aysan doorasho ka dhicin. Doorashada gacan ku rimiska ee dowladda federaalka wadato waxay ka bilaabmi doonta Muqdisho, Jowhar, Beletweyne, Dhusamareb, Galkacyo, iyo Garbaharey. Madaxweyne Farmajo wuxuu kala irdheeyay dowladda federaalka iyo dowlad Goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed Waxaa burburay kalsoonida dib u heshiinta la waday 16 sano, waxaana la maraya marxalad kala cabsi iyo kala shaki iyo isnaceyb.
Beesha Caalamka waxay u muuqata inaysan waxba qabin in Soomaaliya ka dhaco qas iyo qalalaase siyaasadeed kaddibna kaalmo bani’aadam u codsado adduunka. Sidaa awgeed, maxaa la gudboon Midowga Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha, Musharrixiinta rabta inay la tartamaan Madaxweynaha xilka haya, taagerayaashooda iyo inta isbeddel doonka ah?Ujeedada koowaad waxay tahay inaysan dhicin doorashada gacan ku rimiska iyo in dalka iyo dadka laga badbaadiyo qas iyo qalalaase ballaaran ee dalka oo dhan aafeeya. Tallaabooyinka mudan in la tixgeliyo si isbeddel degdeg ah u dhaco waxaa ka mid ah:
1. In Midowga Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha aysan qaban ama qabanqaabin doorasho barbar socota doorashada sharcidarrada ah ee Madaxweyne Farmajo rabo inuu maalmaha soo socda bilaabo. Xilka Guddiga badbaada doorashada 2020/2021 waa inuu noqdaa ka hortaagga iyo diidmada doorashada fowdada ah ee DF qabanqaabineyso.
Waa inaan la oggolaan in Madaxweyne Farmajo inuu cid kale ku qabsado madaxtinnimo, kaddibna la yiraahdo ha la dhexdhexaadiyo. Musharrixiinta xilka Madaxweyne ee malxiiska ah oo taagersan Madaxweyne Farmajo waa in la takooro.
2. In la sugo difaaca iyo Ammaanka Musharrixiinta iyo muwaadiniinta kale ee ka soo horjeeda siyaasadda Madaxweyne farmajo.
3. In la bilaabo ololaha baraarujinta dadweynaha xuquuqdooda iyo xorriyadooda dastuuriga ah lagu tumanayo, laguna dhiirrigeliyo in codkooda soo bandhigaan. Shirkii haweenka Muqdisho wuxuu ahaa tusaale fiican.
4. In dhammaan magaalo madaxyada DG loo diro wufuud kala hadasha Madaxweynayaasha iyo Barlamaannada DG qabashada doorasho sharcidarro ah ee aan lagu heeshiin, mucaaradkana loo oggolaado bannaan baxyo;
5. In warbaahinta lala wadaago xaaladda halista ah ee ka taagan Soomaaliya.
6. In wufuud ama farrimo loo diro dalalka Mareykanka, Ethiopia, kenya, Uganda, turkiga, Jabuti, Midowga Afrika, Midowga Yurub, shiinaha, Rushka, Ingiriska, lala socodsiinayo dhibaatada taagan iyo khatarka dalku ku jiro.
7. In Madaxweyne Farmajo la weydiisto inuu ka tanaasulo qabashada doorasho sharcidarro ah iyo ka qaybgalka tartanka xilka Madaxweynaha 2020/2021.8.
In laga wada hadlo qabashada doorasho Soomaaliya ku rida dariiqa toosan oo waafaqsan dastuur dhammeystiran, heshiis lagu yahay, ku habboon masiirka Ummadda Soomaaliyeed.
W/Qoray: Dr. Maxamud Maxamed Culusow
Jubaland January 24, 2021
Wararka laga helayo Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay maareeyihii hore ee Dekada Kismaayo, Cawil Cali Barre (Cawil Buluq). Marxuum Cawil Buluq ayaa...
Doorashada January 24, 2021
Is-mari-waaga Doorashada dadban ee 2021 ayaa weli taagan iyadoo dowladda Federaalka ay ku fashilantay Qorshaheedii ahaa in Doorashada Aqalka Sare ay ka bilaabato saddexda...
Hirshabelle January 24, 2021
Maleeshyada Alshabaab oo sii kordhiyey weerarrada ay ka wadaan maamulka Hirshabelele ayaa xalay weerarro ku qaaday degmooyinka Jalalaqsi iyo Buuloburte ee Gobolka Hiiraan. Wararka laga...
Somali January 24, 2021
Meydadka laba dhalinyaro ah oo la sheegay in xalay la dilay ayaa saaka lagu arkay xaafadda Carwo Idko ee degmada Wardhiigley, magaalada Muqdisho. Dilka dhalinyaradan...
Galmudug January 23, 2021
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan odayaal nabadoono ah oo maanta lagu dilay Suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta ku heybta ah Odayaasha ayaa...
Doorashada January 21, 2021
Wakiilad Beesha Caalamka oo uu hoggaaminayo Wakiilka Q/Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa kulamo kala gaara ah khadka internet-ka kula yeeshay Musharixiinta Madaxweynaha iyo...
Xog cusub January 19, 2021
Doorashada January 18, 2021
Xukuumadda January 15, 2021
Waxaa qorey; Cabdi Yuusuf FaaraxWaa maalmihii ugu dambeeyey sanadkii...
Dhaqanka Siyaasadeed iyo Sifooyinka Farmaajo iyo Trump ka simanyihiin: 1....
Waxa Qoray: Proff. Yahye Sh. Amir Maanta Anniga oo xanuunsan...
W/Q: Afyare Cabdi Cilmi Kulankii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya...
Cali C/llaahi Cosoble oo Talo u diray Beesha Xawaadle. “Sow ceeb ma aha aha inaad diidaan Cali Guudlaawe” (Qormo)
Talo ku socota tolkey Xawaadle Runtii maanan jecleyn inaan Facebook...
W/Q: Dr. Maxamud M Culusow Ugu horreyn, waxaan ka afeefanaya...
Waxaa taariikhda Soomaalida laga soo wariyay in aay jiri-jireen...
Bishii Maarso 1977, Itoobiya iyo Soomaaliya waxay qarka u...